Ciidamada huwanta ah ee Dowladda iyo Ehellusuna iyo kuwa Jubba oo isku hor fadhiya Beled-xaawo – Radio Daljir
Oktoobar 17, 2013 2:58 b 0
Beled-xaawo, October 17, 2013 – Ciidamo ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba ayaa gaaray duleedka degmada Beled-xaawo ee gobolka Gedo, wararka aan helayno ayaa sheegaya in ciidankaas ay abuureen xiisad ka dhex taagan iyaga iyo ciidamada dowladda.
Wararka aan helayno ayaa sheegaya in xiisad culus ay ka dhex taagan tahay ciidamada maamulka Jubba oo dhinac ah iyo weliba ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ehellusuna oo iyana isku garab ah, wararka ayaa intaas ku daraya in ay jirto cabsi dagaal.
Cismaan Sheikh Cabdi? Abaanduulaha ciidamada ehellusuna ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay ciidamada Jubba soo gaareen duleedka degmada Beled-xaawo, isla markaasna ay damacsan yihiin in ay la wareegaan magaalada xuduuda ku talaa.
?Ma ogolaan doono annaga in ay ciidamada halkan joogaan ama ay u gudbaan dhinaca Jubbada hoose oo ah halka uu joogo hugaamiyaha Jubba Axmed Madoobe, waxaan filaynaa in ay ku noqon doonaan Doolow.? Ayuu yiri Cismaan Sheikh Cabdi.
Ciidamada Jubba taabacsan ayaa ka yimid maalmo ka hor dhinaca degmada Doolow ee ku taala xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa ay ku sii jeedaan dhanka magaalada Kismaayo.
Waxaa jiray khilaaf hor leh oo soo kala dhex galay dowladda Soomaaliya iyo hugaanka maamulka Jubba, xili la isku maan dhaafay halka lagu qabanayo shirka dib-u-heshiisnta arrimaha Jubbooyinka oo ay dowladdu sheegtay in lagu qaban doono Muqdisho 21 October.